धूमपानविरोधी अभियान्ता : एके ४७ ले आफन्तको हत्यादेखि देश छाड्ने धम्कीसम्म
न्युयोर्क टाइम्स – ६ वर्षअघि। करिब एक दर्जन मानिसहरु एके ४७ राइफल तेर्स्याउँदैं अकिनबोदे ओलुवाफेमीको घरमा पसे । घरका गार्ड र उनका सालालाई गोली प्रहार गरी हत्या गरे । तर उनलाई भने केही गरेनन्।
‘थाहा छैन, मलाई त्यो दिन किन मारेनन्,’नाइजेरियाको वातावरण अधिकारवादी संस्था ‘फ्रेन्ड्स अफ दि नाइजेरिया’ का उपप्रमुख रहेका ओलुवाफेमी सम्झन्छन्। उनको संस्था नाइजेरियाकै धूमपानविरोधी प्रमुख संस्था हो।
गत साता केपटाउनमा भएको ‘सूर्तिजन्य पदार्थ र स्वास्थ्य’ विषयको १७ औं विश्वसम्मेलनमा ओलुवाफेमीले धूमपानविरोधी अभियानका क्रममा आफूले भोगेका धम्की र हिंसाका अनुभव टेलिफोनमार्फत् सुनाए।
उक्त घटनामा कसैलाई पनि पक्राउ गरिएन र कसैले पनि त्यस्ता धम्की दिएको प्रमाणित भएन । तर पनि धूमपानविरोधी अभियानमा संलग्नहरुले यस्ता परिस्थितिको सामना गरिनै रहेका छन् । उनको घरमा आएकाहरुले उनको अभियानबाट चुरोट कम्पनी, सूर्ति किसान र सरकारी अधिकारीहरु रिसाएको भन्दै चेतावनी दिए।
जब उसले मुखमा चुरोटको धुवाँ फुक्यो र भन्यो– तत्काल देश छाड ः डा बम
क्षयरोग तथा फोक्सो रोगविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय युनियनका उप क्षेत्रीय निर्देशक डा. तारासिंह बमले २०१२ तिर एउटा अनौठो घटनाको सामना गरे । उनले इण्डोनेशयामा आफूसहित १० जना धूमपानविरोधी अभियन्ताको अनुहार राखेर ‘वान्टेड पोस्ट’ टाँसिएको देखे । इण्डोनेसियाका स्वास्थ्यमन्त्रीको तस्बिरसहितको उक्त पोष्टरको शीर्षक थियो, ‘सूर्ति किसानका दश शत्रुहरु ।’
त्यसको एक वर्षपछि छोराछोरीलाई स्कुल पुर्‍याउन लागेका बेला जकार्ताको अपार्टमेन्टको लबीमा कसैले उनलाई धकेल्यो । ‘उसले मेरो हात समात्यो र भन्यो, तिमीले तत्काल हाम्रो देश छाड,’ उनले भने, ‘त्यसपछि उसले मेरो मुखमा चुरोटका धुवाँ फुक्यो, मेरा बच्चाहरु रुन थाले र उ त्यहाँबाट हिड्यो।’
२ वर्षअघिमात्र पनि उनले फेसबुकमा चेतावनीसहितको सन्देश पाएका थिए । जसमा लेखिएको थियो, ‘हाम्रो सूर्तिसम्बन्धी मामिलामा हस्तक्षेप नगर, तिम्रो कारणले वातावरण नराम्रो भएको छ ।’ डा. बमले पठाउनेको नाम खोजे । त्यसरी फेसबुकमै चेतावनी अरु कोही थिएनन्, इण्डोनेशियाको सूर्ति उत्पादक संघका अधिकारी थिए।
नाइजेरियाका ओलुवाफेमी भने आफूलाई आक्रमण गर्नेहरु सूर्ति उद्योगका मानिसहरु हुन् भन्ने प्रमाण नरहेको बताउँछन। तर आशंका भने सूर्ति उत्पादकहरु प्रति नै छ। उनले आक्रमणकारीहरु नाइजेरियाका लुटेराभन्दा फरक र राम्रा पोशाकलगाएका मानिस रहेको बताए । गोली प्रहारको उक्त घटनामा प्रहरीले पछि ७५ वटा गोलीका खोका फेला पारेको थियो । आक्रमणकारीले झुक्किएर आफ्नै साथीलाई गोली प्रहार गरी मारे भने मिनि भ्यानमा भागे । उनीहरुले उनको घरबाट जम्मा ४ सय डलर, बालबालिकाका केही कपडा र खाना लगे । तर नयाँ टोयोटा कार भने केही गरेनन्।
अर्कोपटक भने ओलुवाफेमीलाई २०१० मा नाइजेरियाको रेडियोमा सूर्ति उत्पादनविरुद्ध बोलिरहेका बेला आक्रमण भएको थियो । दुई वर्षअघि उनले अफ्रिका इण्डिपेन्डेन्ट टेलिभिजनमा9दिइरहेका थिए । ‘त्यहीबीचमा कसैले मेरो साथीलाई फोन गर्‍यो र भन्यो तिम्रो साथी फेरि टीभीमा देखिएको छ, हामीले उसलाई मार्ने पूरै बन्दोबस्त गरेका छौं’ उनले भने।
घरमा आक्रमणपछि उनले त्यहाँ बस्न छाडेका छन् । नाइजेरियन सेनामा जनरल रहेका आफ्ना साथीले घरमा सुरक्षाकर्मी पठाइदिन्छु भन्दा उनले अस्वीकार गरे । यसका साथै बिल एण्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेशनले अमेरिका आउन गरेको आग्रह पनि उनले अस्वीकार गरे । ‘मैले देश छाडें भने तिनीहरु (सूर्ति उत्पादक) ले जितेको ठहरिहाल्छ नि,’ उनी भन्छन् ।
केपटाउनमा भएको सम्मेलनका क्रममा न्यूयोर्कका पूर्व मेयर एवं नसर्ने रोगका लागि 11 संगठनका विश्व सद्भावना दूत माइकल ब्लुमबर्गले सूर्तिजन्यपदार्थविरोधी अन्तर्राष्ट्रियसंस्था ‘स्टपिङ टोबाको अर्गनाइजेसन एण्ड प्रोडक्ट्स’ का लागि २ करोड डलर चन्दा दिने घोषणा गरे।
सम्मेलनका क्रममा संवाददाताहरुले सोधको जिज्ञासामा ब्लुमबर्गले आफ्नो मुख्य निशाना मार्लबोरो चुरोटको उत्पादक कम्पनी फिलिप मोरिसविरुद्ध रहेको बताए । गत वर्ष उक्त कम्पनीले ‘धूमपानरहित विश्व फाउन्डेशन’ संस्था घोषणा गर्दै त्यसका लागि १२ वर्षमा १ अर्ब डलर दिने घोषणा गरेको थियो । ‘जनतालाई भ्रममा पार्न फिलिप मोरिसको यो प्रयास हो, यो नक्कली समाचार हो,’ ब्लुमबर्गले भने।
तस्बिर: न्युयोर्क टाइम्स